Shirkii u socday R/wasaaraha iyo Midowga Musharaxiinta ayaa ku dhamaaday natiijo la’aan… – Hagaag.com
Shirkii u socday R/wasaaraha iyo Midowga Musharaxiinta ayaa ku dhamaaday natiijo la’aan…
Waxaa xalay shir saacado badan qaatay Magaalada Muqdisho ku yeeshay Ra’iisal Wasaaraha Somalia, Maxamed Xuseen Rooble iyo Xubnaha Midowga Musharaxiinta, iyadoo shirka looga hadlayay arrimihii ay iskula soo qaadeen labadii kulan ee hore.
Wasiirka Amniga Somalia, Xasan Xundubey Jimcaale oo geba-gabadii shirkaasi Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Midowga Musharaxiinta ay dalbadeen in laga qaybgeliyo shirka wadatashiga qaran, ee Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, go’aankaas oo sida uu sheegay aanay lahayn xukuumadda oo keliya.
“Dadaal kasta oo midowga bixiyay iyo tanaasul kasta uu sameeyay runtii taas bedelkeeda anaga maanan arkin. Waxaan aad iyo aad uga xunahay in dad go’aanka ayaga iska leh oo dastuuriyan iyo siyaasiyanba u leh, oo aan caawa dhan la fadhinay inay muuqatay go’aanka ayaga inaysan lahayn, waa nasiib-darro u soo hooyatay taariikhda siyaasadda Somalia.” Ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Dhanka kale Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa sheegay in qodobadii shirka looga hadlay leesku raacay, marka laga soo taggo hal qodob oo Midowga Musharaxiinta ku adkeysteen.